Hay’adaha u dooda xuquuqda biniadanka oo walaac ka muujiyay howlgalka booliska ay ka wadaan magaalada Mumias – The Voice of Northeastern Kenya
Hay’adaha u dooda xuquuqda biniadanka oo walaac ka muujiyay howlgalka booliska ay ka wadaan magaalada Mumias
Star FM November 26, 2016
Hay’adaha u doodada xuquuqda aadanaha ee dalka ayaa walaac ka muujiyay habka ay ciidamada booliska kuwooda u tababaran sida Militiriga ee GSU-da ay howlgalka oga wadaan Magaalada Mumias ee Maamul goboledka Kakamega.
Ciidamadan ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay guri guri u galayay xaafadaha Magaaladaasi waxayna doonayaan in ay dib u heleen 7 qoryo iyo 180 xabadood oo rasaas ah oo laga dhacay saldhiga booliska ee Bokeer.
Waxaa lagu eedeynayaa ciidamada in aysan la shaqeynin laanta sirdoonka dalka balse xafadkooda uu yahay oo kali ah sidii ay soo heli lahaayen qoryahaasi iyagoo aan eegin sharciga.
Gudoomiye ku xigeenka hay’ada KNHCR George Moraara ayaa sheegay in laamaha amaanka ay isticmaalayaan xoog iyo si ka baxsan sharicga taaso waxyeelo u geysaneyso shacabka aan waxba galabsan.
Waxaa u intaa kudaray in hay’adaasi ay wada tashi la sameyn doonaan hay’ada kale ee baaritaanada iyo dabagalka arimaha booliska ee IPOA si loo ogaado falal kufsi uu kamid yahay oo ay GSU-da ka geysanayaan xaafadaha Magalada mumias.
Shalay ayeey aheyd markii lasoo tabiyay in uu geeriyooday nin ka shaqeynayay maakink kaaso u dhintay jirdil daran oo ay u gesteen ciidamada howlgalka wada.
Isniinti aynu soo dhafnay ayeey eheyd markii kooxo hubeysan ay weerar ku qaaden saldhiga boooker halkaasina ay ka qaaden qoryaha iyadoo dhacdadaasi uu ku dhaawacmay hal askari.
← Guddiga EACC xabsiga u taxaabay saraakiil loo heysto fadeexadda NYS-ta
Ninki la sheegay in uu iska dhigayay dhaqtar oo damiin lacageed lagu sii daayay →